पूँजी बढाउन मात्रै मर्ज गर्न खोजिएजस्तो लाग्दैन, कृष्णराज लामिछानेको अन्तर्वार्ता
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले मौद्रिक नीतिअघि मात्रै बैंकहरुबीच लभ गर्ने समय भएको भन्दै फोर्सफुल मर्जरको संकेत गरिसकेका छन्। गत बर्षबाटै चलिरहेको बिग मर्जरको वहशमा सरकारसँगै राष्ट्र बैंक पनि सहमत देखिएको छ। बिग मर्जरको बहसमा विकास बैंकहरुको औचित्य समाप्त हुने अवस्था पनि देखिन थालेको छ।
यसै सन्दर्भमा बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेलाई सोधे- बजेटमा बिग मर्जरको कुरा परेको छ। राष्ट्र बैंकले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संकेत गरिसकेको छ। पूँजी बृद्धिलगत्तै विग मर्जरको नीति कत्तिको ठिक होलाॽ
अहिलेको मर्जरको चर्चा भएको बैंकको पूँजी बढाउनका लागि अवश्य पनि होइन। पूँजी कम भयो, ब्यवसाय बढाउन गाह्रो भयो भनेर मर्जरको कुरा भएको पनि होइन। मेरो विचारमा अहिलेको आएको मर्जरको इस्यु भनेको बैंकहरुमा अलिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि भयो, एउटाले यति प्रतिशतले ब्यापार बढायो, मैले किन बढाउन नसक्ने? भनेर तछाडमछाड पनि भइरहेको छ। बैंकहरुकै संख्या धेरै भएर यस्तो भएको हो, यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर अहिले चर्चा भएको हो जस्तो लाग्छ।
पहिला पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएर भनेर मर्जर नीति ल्याइएको थियो। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी धेरै नै घटे तर बाणिज्य बैंकहरुको खासै संख्या घटेन। त्यस हिसाबले पनि अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीभन्दा पनि बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्नुपर्छ भनेर छलफल भएको छ। त्यही हिसाबले बजेटमा पनि यसले स्थान पाएको हो। मुलुकमा धेरै बैंक भएर अस्थिरता सृजना हुनु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर निक्षेप संकलन भन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ। तरलता अभाव भएको छ। त्यसैले पूँजी मात्र बढाउनका लागि यो नीति आउन खोजेजस्तो लाग्दैन।
2019-06-25 - 472 view(s) - bizmandu